Maitiro ekuvandudza edu Kindle nemaoko | MaReaders ese
Maitiro ekuvandudza edu Kindle nemaoko
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, vaverengi, Software, Kindle tutorials
Iri igwaro pfupi rezvinyorwa zveMhando Kindle zvishandiso. Vaviri Todo eReaders neni hatina hanya nezvingaitika kune chako chishandiso. Usati waita chero chinhu, verenga iro rese gwara wobva wadzokorora. Pakutanga vhiki ino, Amazon yakaburitsa zvigadziriso zvemidziyo yayo umo yaisanganisira kuiswa kweGoodreads neReader. Iyo inotungamira inoshanda kune chero Kindle chishandiso, sekushandisa manyoreri pane ese maReaders uye mahwendefa anoitwa nenzira imwecheteyo. Usati waenderera negwara, ndikuudze kuti ndaita yekuvandudza bhuku pane yangu Kindle Moto uye yakandipa kukanganisa. Ini ndanyatso kuyedza gadza vhezheni 11.3.1 inova ndiyo iine kuiswa kweGoodreads. Neraki, kuiswa kwacho hakuna kuita chero shanduko huru kuchinhu changu uye na reset Izvo zvave zvakakwana kuti adzokere mukushanda, asi basa rangu nderekutaurirana kuti iwe uzive.
Chii chatinoda kuti zviitwe zvemanyore
Chishandiso cheMhando chakapihwa 100% bhatiri.
Tambo yeUSB yekutaurirana iyo Kindle neiyo pc.
Iwo madhiraivha akaiswa nenzira kwayo kuti PC izive iyo Kindle.
Chinhu chekutanga kuve ne Kindle ne100% bhatiriIzvo hazvina basa kuti Kindle chii uye kana zvichatora nguva yakareba kana kwete. Kana paine kukundikana kwesimba, iyo Kindle inosara senge chidhinha, saka zvakakosha kuti uve nebhatiri pa100%, kuitira chengetedzo. Kana tangosimbisa ichi chinodiwa, zvakakosha kuti pc yedu itaurirane neMhando, ndiko kuti, kana tikabatanidza iyo Kindle, ichaverenga iyo pc seimwezve yekuchengetera unit, ichioneka pazasi pemadhiraivhu akaoma mune iyo Windows. Neichi chikonzero, zvakakosha kuti iwe uve nemaAmazon madhiraivha akaiswa. Kana usina, unogona dhawunirodha kubva pane iyi link.
Kana tangova nezvinodiwa pamusoro, isu ticha dandemutande iri uye isu tinotarisa yazvino vhezheni yeSoftware. Kana iri Kindle Paperwhite iri 5.4.2 uye paMhando yeMoto iri 11.3.1. Kana isu tine idzi shanduro, hatigone kugadzirisa sezvo ari iwo achangoburwa mavhezheni. Kana isu tine shanduro dzakaderera, zvinova zvakajairika, tinogona kuramba tichigadzirisa iyo Kindle.
Asi ini ndinoziva sei iyo vhezheni yangu Kindle ine?
Kuti tizive vhezheni yatinayo, tinoenda paMhando yedu kumenyu «Device»Kubva paMhando dzemhando dzemenyu uye tsvaga sarudzo«pamusoro»Kana iri iyo Kindle Moto, inowanikwa mune sarudzo«zvimwe»Kubva kumusoro kubhawa. Padhuze neshanduro iwe unowana bhatani rinoti «Gadziridza Kindle»Ndeipi yakaremara, ndiko kuti, tinodzvanya chatinodzvanya hapana zvazvinoita. Iri bhatani rakakosha nekuti rinogoneswa gare gare.
Kana tangosimbisa kuti tinoda iyo yekuvandudza, tinoenda ku dandemutande iri uye tinotora pasi rekuvandudza package, tinotora iyo inoenderana neyedu modhi. Iye zvino zvatava neyakagadziridzwa pasuru, tinoteedzera nekunamatira mufaira «Internal Storage»Kubva kuMhando yedu, tinoita izvi kuburikidza nePC, kuve neMhando yakabatana netambo. Kana isu tapedza kuteedzera iyo yekuvandudza pasuru isu tinosunungura tambo uye isu tinongobata iyo Kindle. Iye zvino tinoenda kuchiratidziro kwatakaudzwa nezvevhezheni yatainge takaisa uye tichaona kuti «Gadziridza Kindle»Ikozvino yashanda uye inoshanda nemazvo, sezvatinoisimbisa uye kumisikidza kunotanga.
Munguva iyi maitiro Kindle mudziyo unozotangazve kakawanda, usazvidya moyo, zvinogona kukupa kukanganisa, sezvazvakaitika kwandiri, mhinduro yacho inotaurirwa nedhiza racho pachayo, asi zvandakaita kudzima Mutsa uye kudzokera kumashure kuibatidza, zvese kubva kubhatani bhatani. Kana iwe usina kana nekanganiso, makorokoto, iwe unotova neiyo nyowani yekuvandudza yakagadzirira kuenda. Kuti upedze, ndikuudze kuti ino gadziriso yemanyorerwo inoitwa neakavimbika maAmazon mapakeji, saka kana isu tine yedu Kindle yakadzika midzi, kunyanya mune iyo Kindle Moto, yedu kifaa icharasikirwa iwo mudzi mushure meye manyore kuvandudzwa. Saka funga usati waita iyo yekuvandudza kana iwe uchifunga kuti inokodzera iwe kana kwete. Oo nenzira, kana iwe uine chero mibvunzo zvine chekuita nedzidziso kana ichangobva kungovandudzwa, taura nezvazvo muchinyorwa, zvinobatsira.
Mamwe mashoko - Goodreads inonyatsojoinha iyo Kindle mhuri, Xda-Vagadziri,
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Amazon Kindle » Maitiro ekuvandudza edu Kindle nemaoko
Iyo Kindle paperwhite yechizvarwa chekutanga haina kusanganisira kuverenga kwakanaka, ini ndakagadzirisa yangu vhiki rapfuura uye hapana chimwe cheicho chinoratidzika kwandiri. Iyo yazvino vhezheni yechizvarwa chekutanga KP ndeye 1 🙁
Yangu ndeimwe yeiyo nyowani uye iyo yakanaka yekuverenga icon haina kuoneka, ino sevhisi ichave yeAmerican vhezheni?
Ndine iyo American vhezheni uye yekupedzisira gadziriso iyo inondikanda ini ndeye 5.3.9
Ini handisati ndaedza kugadzirisa asi ini ndaverenga kuti maGoodreads anongoshanda muUnited States.
Mhoroi munhu wese. Iyo yekubatanidza muchinyorwa ichi chiAmerican vhezheni, asi haina basa, system yacho yakafanana neyeye nhare mbozha, iyo faira inoiswa uye mudziyo unonzi uutakure. Izvo hazvina basa inyaya yeshanduro, iwe unofanirwa kuona kuti chako chishandiso chiri chepasi vhezheni zvirinani pane iya inoiswa neAmazon pawebhusaiti yayo. Parizvino mishumo yakaziviswa yeiyo nyowani Kindle Moto, ye2013 Kindle Paperwhite uye yechipiri chizvarwa Kindle Moto, kunyangwe iyi ini ndaedza uye iyo yekudzorera inopa kukanganisa. Kune vamwe vese ndine chokwadi chekuti iyo yekuvandudza ichabuda asi ini handizive kuti riini, pamwe yatovepo kana kusvika chinotevera chigadzirwa chinotanga, kwete ichi, chinozivikanwa chete neAmazon. Ndine urombo nekusagona kuve ndakanyanya kutaura, ndingade. Ah uye nekutenda nekuverenga nekutitevera.
Mune iyo American vhezheni, iwe unoti chii kana iwo maficha ekuverenga achimhanya?
Ini ndichangobva kutenga chizvarwa chechipiri Kindel, kubva kwayakanyangarika icon yegirobhu diki, iro rinoshandiswa kudzosera chidzitiro uye kudzikamisa mwenje wechiedza. Ndakaita zvese zvandinogona ndisina kudzoreredza iyo icon, kugadzirisa, reboot, reset muchiitiko chimwe nechimwe kusvika katanhatu. Pasina ichi chishandiso muverengi haakwanise kushandiswa, chinonetesa maziso uye hachina basa husiku. Pane mumwe wenyu, connoisseurs, angandibatsira ???? Ndatenda
Yangu nyowani paperwhite (2015) inoratidzira Kwakanaka Kuverenga. Kwete mune vamwe.
Inoshanda. Sezvo iwe uchitsanangura mugwara, iyo yekuvandudza inoitwa nematanho akapusa, ndatenda. "Kindle Paperwhite (6th Generation) yakaunzwa kune vhezheni 5.6.5"
ane ayo akadaro
Izvo zvave kutozivikanwa kana mabhureki akanaka anogona kuverengerwa muchizvarwa chekutanga Kindle paperwhite (2012) yakatengwa kuSpain? Ndakaedza kugadzirisa software yeMhando yangu sezvaunotaura uye hazvishande. Ndatenda!
Pindura kuna Ane Ayo
geardo durand akadaro
Amazon yakanditumira email inoratidza iyo otomatiki inogadziridza iyo kindle, ini handizive zvakaitika, ndine mazuva maviri ndakabatana necompc uye zvinoratidzika pane kindle apfuura, Chii chandingaite?
Pindura kuna gerardo durand
Ndingaite sei neyangu kuti ndine vhezheni 2.5.3?
Pindura kuna Romy
Mhoroi, ndine kindle 2.5.8 ine serial inotanga ne b009… Ini ndinoteedzera iyo yekuvandudza .bin faira, ini ndinoita nhanho dzese, asi hazvimbogonesa sarudzo ye «kugadzirisa yako kindle».
Muchokwadi, pandinoibatanidza zvakare neUSb ndinoona iyo kindle yabvisa iyo .bin faira
Chero kurudziro mune izvi?
Tagus Tablet iri pasi pe € 80, piritsi inonakidza kuverenga
Woxter Scriba 190 Pearl, iyo inokurumidza eReader pamusika